ခွန်သန်းထွန်း | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ခွန်သန်းထွန်း
Category Archives: ခွန်သန်းထွန်း
Khun Than Htun
ခွန်သန်းထွန်း – အရှေ့နေတေးစု (၂) [Album]
၀၁။ လာလမ်းနောက်လှည့် ၀၂။ ကွယ်ရာကမောင် ၀၃။ တိမ်သဉ္ဇာမေနှင့်မြေပြင်လွှာမောင် ၀၄။ ရှိစေတော့မောင့်ကို ၀၅။ ကျောင်းတော်လွိုင်လင်မြို့ ၀၆။ ပြောတုန်းကဖြင့် ၀၇။ တစ်လှေတည်းစီး ၀၈။ မသည်းအူ ၀၉။ ဝေးရပေမယ့် ၁၀။ ရင်ခွင်ဦး ၁၁။ တစ်ရေးနိုးနွေအလွမ်း ၁၂။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်လေတဲ့ ၁၃။ တာဝန်တွေကျေမှ [Download Whole Album]
April 30, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခွန်သန်းထွန်း Myanmar Artist Leaveacomment
ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် – ခွန်သန်းထွန်း
01-ကျွန်တော့်ဘ၀ ခွန်သန်းထွန်း 02-အလာနှောင်းတဲ့စိုင်း ခွန်သန်းထွန်း 03-မြားနတ်မောင်သို့ ခွန်သန်းထွန်း 04-အချစ်လွတ်လပ်ရေး ခွန်သန်းထွန်း 05-ဘီးကလေး ခွန်သန်းထွန်း 06-ဒီတခါတွေ့ရင် ခွန်သန်းထွန်း 07-ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ခွန်သန်းထွန်း 08-တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ကျက်သရေဆောင် ခွန်သန်းထွန်း 09-သည်းဦး ခွန်သန်းထွန်း 10-ကြယ်ကြွေချိန်ထိ ခွန်သန်းထွန်း 11-မိုးပိုခိုမောင်းတချူး ခွန်သန်းထွန်း 12-အရူးနဲ့အမူး ခွန်သန်းထွန်း 13-ကျင်လည်ရာကိုယ်စီ ခွန်သန်းထွန်း Download Album Link : http://www.mediafire.com/?0bviueo18ekhs38 Album tracks credited to Bo Nay Linn and cover credited to Ko Kyaw Soe Wynn
April 11, 2013 Snuo Mwoani အခွေ (တကိုယ်တော်) ခွန်သန်းထွန်း Leaveacomment
အကောင်းဆုံးရွှေတေးစု – ခွန်သန်းထွန်း
01. မသည်းဖြူ 02. မောင့်အချစ်ဆုံးမုန်းသူ 03. နွေဆိုး (တနေ့တလံပေါ့ ပုဂံရယ်) 04. မြားနတ်မောင်သို့ 05. အလွမ်းဘွဲ့ မေနဲ့မောင် 06. ချယ်ရီရယ် တောင်ပြာတန်းရယ် နန်းရယ် 07. အလာနှောင်းတဲ့စိုင်း 08. ၀ါကျွတ်ပြီ အချစ်ရေ 09. ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် 10. အိမ်ရှင်လောင်း 11. မေရယ်ရှိမှ မောင့်ဘ၀ 12. ကျွန်တော့ဘ၀ 13. တဒင်္ဂထဲက တစ်ခဏ ဘ၀ http://www.mediafire.com/download.php?09pgrvyikhjtazi Credit – Ko Kyaw Soe Wynn
March 19, 2013 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခွန်သန်းထွန်း2Comments
၀၁။ လာလမ်းနောက်လှည့် ၀၂။ ကွယ်ရာကမောင် ၀၃။ တိမ်သဉ္စာမေနှင့် မြေပြင်လွှာမောင် ၀၄။ ရှိစေတော့မောင့်ကို ၀၅။ ကျောင်းတော်သာလွိုင်လင် ၀၆။ ပြောတုန်းကတော့ဖြင့် ၀၇။ တစ်လှေတည်းစီး ၀၈။ မသည်းဖြူ ၀၉။ ဝေးခဲ့ရပေမယ့် ၁၀။ ရင်ခွင်ဦး ၁၁။ တစ်ရေးနိုးနွေအလွမ်း ၁၂။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်လေတဲ့ ၁၃။ တာဝန်တွေကျေမှ တောင်ကြီးမြို့  အလွမ်းပြေး)
March 21, 2010 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ခွန်သန်းထွန်6းComments